पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानकी पूर्वपत्नी जुन यस्ती छिन, जान्नुहोस् उनका बारेमा रोचक ५ कुरा – Jagaran Nepal
Jagaran Nepal शनिबार, चैत्र १९, २०७८
पाकिस्तानमा इमरान खानको सरकार समस्यामा परेको छ । इमरान खानले जुनसुकै बेला प्रधानमन्त्रीको कुर्सी गुमाउनु पर्ने हुनसक्छ । यसैबीच इमरान खानकी पूर्वपत्नी रेहम खानले इमरान खानमाथि धेरै आरोप लगाएकी छिन् । पूर्व पत्रकार रेहम खान इमरान खानकी दोस्रो श्रीमती थिइन् । दुवैले सन् २०१५ मा स’म्ब’न्धवि’च्छेद ग’रेका थिए । अहिले रेहमले लगातार बयान दिएर इमरान सरकारलाई घेरेकी छिन् ।
व्यक्तिगत जीवनको कुरा गर्ने हो भने उनी सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा धेरै तस्बिर सेयर गरिरहेकी छिन्, जसबाट उनको मनपर्ने र मन नपर्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ । त्यसोभए रेहम खानको बारेमा केही रोचक कुराहरू पनि जानौं।
इमरान खान र रेहमको विवाह ६ जनवरी २०१५ मा भएको थियो । तर ३० अक्टोबर २०१५ अर्थात् ९ महिनामै उनीहरुको वैवाहिक सम्बन्ध टु’ट्यो र स’म्ब’न्धवि’च्छे’द भयो । ४८ वर्षीया रेहमले आफ्नो अधिकांश अध्ययन बेलायतमा गरेकी छिन् । रेहमले समाजशास्त्रमा स्नातक गरे र त्यसपछि पत्रकारिता पढिन्।
रेहम खानले बीबीसीमा मौसम प्रस्तोताका रूपमा आफ्नो करियर सुरु गरेकी थिइन्। त्यसपछि उनले प्रसारण पत्रकारको रुपमा पनि काम गरे । उनले युकेमा सनसाइन रेडियो हेरफोर्ड र वर्सेस्टरसँग ब्रेकफास्ट समाचार प्रस्तोताको रूपमा पनि काम गरिसकेकी छिन्। १०१३ मा, रेहम खान पाकिस्तान फर्किए र पाकिस्तानी समाचार च्यानलमा प्रवेश गरे। अब रेहमको जीवनका रोचक कुराहरु पनि जानौँ ।
रेहमको इन्स्टाग्राम पोस्टका अनुसार उनी धेरै स्टाइलिस छिन् र उनलाई विभिन्न प्रकारका लुगा लगाउन मनपर्छ । विभिन्न पहिरनमा आफ्ना तस्विरहरु सेयर गरिरहेकी छिन् । हरेक प्रकारको पोशाक तिनीहरूलाई राम्रोसँग सूट गर्दछ।
1. रेहम स्टाइलिश छ – रेहमको इन्स्टाग्राम पोस्टका अनुसार उनी धेरै स्टाइलिस छिन् र उनलाई विभिन्न प्रकारका लुगा लगाउन मनपर्छ । विभिन्न पहिरनमा आफ्ना तस्विरहरु सेयर गरिरहेकी छिन् । हरेक प्रकारको पोशाक तिनीहरूलाई राम्रोसँग सूट गर्दछ।
२. किताब पढ्न मन लाग्छ -रेहम पूर्व पत्रकार पनि हुन् । रेहमलाई किताब पढ्न निकै मन पर्छ । उनको घरमा पुस्तकहरूको ठूलो सङ्कलन छ।
3. घुम्न मनपराउने -रेहमले आफ्नो इन्स्टाग्राममा धेरै तस्विर शेयर गरेकी छिन्, जसमा उनी विभिन्न ठाउँमा घुमिरहेकी छिन् । जसलाई देख्न सकिन्छ कि उनीहरु घुम्न निकै मन पराउँछन् । उनले प्राकृतिक स्थलका धेरै तस्बिर सेयर गरेका छन् । यसको मतलब उनी प्राकृतिक ठाउँमा घुम्न मन पराउँछन्।
4. खेलहरू पनि मन पराउँछन् -रेहमले इन्स्टाग्राममा खेलकुद गतिविधिका तस्बिर पनि सेयर गरेकी छिन् । धेरै तस्बिर र भिडियोमा उनी आफैं गेम खेलेको देखिन्छ । यसको अर्थ उनी खेलकुदमा निकै रुची राख्छन् ।
5. खानेकुरा -रेहम प्रायः खानाका तस्बिर सेयर गर्छिन् । रेहमको इन्स्टाग्राममा रेस्टुरेन्ट र घरमा खाना पकाउँदा धेरै तस्विर र भिडियो पनि देख्न सकिन्छ । त्यसैले रेहम खान मन पराउनेमा कुनै शंका छैन ।